Microsoft - ITS Tech Tech
Innovative Technology Solutions dia manam-pahaizana Silver Learning Partner Microsoft ary manolotra ny mari-pahaizana rehetra momba ny serasera Microsoft. Microsoft dia mpisava lalana amin'ny teknolojia IT ary manome sehatra maro samihafa anisan'izany ny Microsoft Office Applications, sehatr'asa fandraharahana, virtoaly, fitantanana fampiharana orinasa, fitantanana database, ary maro hafa.
Ny tetikasa IT manerantany manerantany dia afaka misoratra anarana amin'ny ITS ho an'ny mari-pahaizana MS maro samihafa ary hahazo tombony amin'ny alàlan'ny fanatanterahana ny mari-pahaizana Microsoft
Ampiharina amin'ny eDiscovery amin'ny toerana
Ampitahao ireo Politika momba ny fampiharana misimisy sy ny fanarahan-dalàna
Famolavolana sy fanatanterahana ny lahatsoratry ny Cross-Forest
Tadiavo ny fiantraikan'ny fampidirana SQL standalone daty.
Amboary ireo mpampiasa, vondrona sy famandrihana ao amin'ny Azure Active Directory ohatra.
Lisitry ny Microsoft Courses
Nahoana no ITS?
Ampiasao ny tranonkala ITS mba hamita ny lalanao amin'ny fotoana rehetra tianao
Mialoha ny asa ataonao
Ampitomboy ny fahaizan'ny mpampiasa mitady. Fikirana amin'ny fianarana 1500 ho maimaim-poana.
Fampiofanana tsara kalitao
Tadiavo ny fahaiza-manao ilainao mba hanangonana, handinihana ary handinihana ny angon-drakitra ho an'ny tontolon'ny data ankehitriny.
Raiso ny karamanao mankany amin'ny ambaratonga manaraka
Tolotra fanampiny nomena avy amin'ny Partners